Maqaallada ku saabsan Switzerland
Sidee loo codsadaa fiisada Switzerland Schengen?
February 8, 2021 Shubham Sharma Switzerland, fiisada
Ma waxaad u safreysaa Switzerland? Waa inaad dalbato fiisada marka hore si aad ugu safarto Switzerland. Qofku wuxuu u baahan yahay inuu dalbado Visa Schengen si uu u booqdo Switzerland. Dukumiintiga fiisada ayaa sidoo kale kuu sahlaya inaad gasho Schengen
Bangiyada ugu Fiican Switzerland
Waxaa laga yaabaa 17, 2020 Shubham Sharma lacag, Switzerland
Qeybta Bangiga ee Switzerland aad ayaa loo horumariyey. Switzerland waxay leedahay mid ka mid ah nidaamyada bangiyada ugu wanaagsan adduunka. Nidaamkooda bangiyada waxay leeyihiin cabbir aad u ballaaran, ganacsi diiradda lagu saarayo qaab sharci ah. Bangiga dhexe ee Switzerland waa
Sidaad ku Hesho Magangalyo Swiiserland
Waxaa laga yaabaa 14, 2020 Shubham Sharma qaxootiga, Switzerland
Shaki kuma jiro in Switzerland ay qurux badan tahay, waxayna soo jiidataa dalxiisayaasha adduunka oo idil. In kasta oo aad u safartay Switzerland, waxaad sidoo kale ka codsan kartaa magangelyo halkaas. Waxaa jira nidaam sax ah oo aad u baahan tahay inaad raacdo haddii aad u baahato
Adeegyada Caafimaadka ee ugu Fiican ama Isbitaalada Switzerland!
Waxaa laga yaabaa 6, 2020 Shubham Sharma caafimaadka, Switzerland
Switzerland waxay leedahay mid ka mid ah nidaamyada daryeelka caafimaad ee ugu fiican adduunka. Switzerland waxay leedahay qiyaastii 280 isbitaalo oo adeeg u fidiya muwaadiniinteeda. Isbitaalada Switzerland waxay leeyihiin awood qiyaastii 40,000 bukaan ah sanadkiiba. Switzerland ma lahan wax dowladdu maamusho ama
Booqashada Switzerland, Waatan Hagahan Xilliyeed
Safarka Swiiserland wuxuu kuu fidiyaa bilicda dabiiciga ah ee aan la jaanqaadi karin iyo raaxeysiga dhibkastoo aad booqatid. Waxay ku taal inta udhaxeysa Alps iyo buuraha Jura, dalka alifbeet waxaa ka buuxa magaalooyin firfircoon, muuqaallo cajiib ah, iyo nashaadyo xiiso leh. Oo leh topographies kala duwan oo dhan iyada
Ugu Fiican Iyo Gaadiidka Ugu Adag Switzerland
November 20, 2019 Shubham Sharma soo qaado, Switzerland
Switzerland waxay leedahay shabakad cufan oo jidad iyo jidad tareenno ah. Shabakada gaadiidka dadweynaha waxay leedahay dherer dhan 24,500 kilomitir waxayna leedahay inka badan 2600 saldhig iyo joogsi. Shabakada wadooyinka ee Switzerland ayaa lagu maalgaliyaa khidmadaha wadooyinka iyo cashuurta baabuurta.
Hoteellada Miisaaniyadda ugufiican Switzerland
Switzerland waa midda ugu quruxda badan uguna wanaagsan magaalooyinka ugu wanaagsan ee lagu noolaado. Caasimadda Switzerland ee Geneva waxay kaloo kamid tahay magaalooyinka ugu qaalisan adduunka. Tani dhab ahaan ma keento ereyada 'hoy miisaaniyad'